सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक कपाल कात्री ब्रान्ड नाई कैंची ब्रान्ड - जापान कैंची
सर्वश्रेष्ठ हेयरड्रेसिङ सिजर ब्रान्डहरू: कपाल स्टाइलिस्ट पेशेवरहरूको लागि
जनवरी 28, 20219मिनेट पढ्ने 11 टिप्पणिहरु
प्रत्येक वर्ष हामीसंग अधिक कपाल कैंची ब्रान्डहरू देखा पर्दै छन् र हराइरहेका छन्, त्यसोभए पेशेवरहरूले कसरी उनीहरूका लागि सही ब्रान्ड छनौट गरिरहेका छन्?
हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय दर्शकहरुबाट धेरै अनुरोध पछि, हामीले कपालका र कपालका लागि सबै भन्दा राम्रा र सबैभन्दा प्रतिष्ठित कपाल स्किसर ब्रान्डहरूको सूची राख्ने निर्णय गरेका छौं!
द्रुत पक्ष नोट, ब्रान्डको छनौट सबै तिनीहरूको प्रतिष्ठा, मूल्य, डिजाइन र मोडेलहरूको सूची को बारेमा हो।
हरेक ब्रान्डले प्रत्येक कपाल, नाई, हेयरस्टाइलिस्ट वा घर कपाल काट्ने उत्साहीहरूलाई सूट गर्दैन, त्यसैले हामीले सबैको आवश्यकताहरू समावेश गर्न हाम्रो सूचीलाई विविधता दियौं!
द्रुत सारांश: कपाल पेशेवरहरूको लागि उत्तम सिचिया ब्रांड
व्यक्तिलाई उत्तम कैंची ब्रान्डहरूमा द्रुत उत्तरहरू खोज्नका लागि, हामीले एउटा सूची सिर्जना गरेका छौं जुन समावेश गर्दछ पेशेवर कपाल, कपाल, र घर कपाल काट्ने उत्साहीहरूको आवश्यकता।
अस्ट्रेलिया, क्यानडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजील्याण्ड, युरोप र एशियामा उत्तम बिक्रि हुने पेशेवर हेयरड्रेसि sc सिंची ब्रांडहरू हुन्:
Jaguar सोलिन्जेन कैंची (सब भन्दा सम्मानित र विविध संग्रह)
जान्तेत्सु (सर्वश्रेष्ठ मूल्य पेशेवर कपाल कैंची)
Yasaka (सबै भन्दा प्रसिद्ध चिनियाँ जापानी ब्रांड)
Ichiro (महान मूल्य व्यावसायिक सेट्स)
Kamisori (अनौंठो र शक्तिशाली पेशेवर कैंची डिजाइन)
Mina (सर्वश्रेष्ठ शुरुवात गर्ने र आधारभूत कपाल क्यान्सरहरू)
Feather (सर्वश्रेष्ठ रेजर + बेसिक जापानी कैंची)
यदि तपाईं एक पेशेवर कैंची ब्रान्डको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने, अब तपाईंसँग छनौट गर्न धेरै विकल्पहरू छन्। प्रत्येक कैंची ब्रान्ड फरक हुन्छ, र तिनीहरू सबैसँग आफ्नो सुविधाहरू छन्, कपाल पेशेवरहरूलाई सन्तुष्ट पार्छन्, र विश्वमा आश्चर्यजनक मोडेलहरू वितरण गर्न जारी राख्छन्।
यदि तपाईंलाई लाग्छ कि हामी हेयरड्रेसि sc सिंची ब्रान्डहरू हराइरहेका छौं जुन यस सूचीमा हुनुपर्दछ, हामीलाई भन्नुहोस्! हामी सँधै नयाँ र परिवर्तन भइरहेको ब्रान्डको लागि खोजिरहेका छौं जुन पेशेवरहरूले खोजी गरिरहेका छन्।
पेशेवर कैंची ब्रान्डको सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष सन्तुष्टि कपाल र नाई ग्राहकहरूले आफ्नो खरीदको साथ गर्छन्।
उत्तम ब्रान्ड एक प्रीमियम उत्पादक हुन सक्छ, कैंचीको सस्तो र सस्तो उत्पादक हुन सक्छ, ग्राहकहरू सन्तुष्ट भएसम्म फरक पर्दैन!
चाहे तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, क्यानडा, ब्रिटेन, अष्ट्रेलिया, एशिया वा न्यूजील्याण्डमा हुनुहुन्छ, उत्तम कैंची ब्रान्डहरू नि: शुल्क शिपिंगको साथ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उपलब्ध छन्!
हामी हाम्रो २०२० हेयरड्रेसि sc सिंची ब्रान्डहरूको सूची निर्माण गर्दैछौं, त्यसैले आज हामीलाई थप जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्।
उत्तम कपाल कैंची ब्रान्ड सूची
हामी प्रत्येक कैंची ब्रान्ड, उनीहरूको ईतिहास, र के के कारण उनीहरूले सर्वश्रेष्ठ ब्रान्डहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उपलब्ध गराउँछन् वरिपरि अलि बढि विस्तारमा जान दिनुहोस्।
कुनै समय बर्बाद नगरी, हामी सहि नम्बर १ बाट सुरू गरेर सबै भन्दा राम्रो कैंची ब्राण्डको सूचीमा उफ्रन लाग्नेछौं।
1. Jaguar: सबै भन्दा सम्मानित र विविध कैंची ब्रान्ड
Jaguar सोलिन्जेन, आधिकारिक वेबसाइट यहाँ फेला पर्‍यो, विश्वको सबैभन्दा प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित र सबैभन्दा पुरानो कपाल कैंची ब्रान्ड हो!
तिनीहरू लगभग १०० बर्ष को लागी गरीएको छ, र कैंची को एक पूर्ण र विविध श्रेणी प्रदान गर्दछ जुन मूल्य, शैली र प्रयोगबाट भिन्न छ। तिनीहरूसँग एक इलेक्ट्रिक स्चीसर पनि भनिन्छ TCC द क्यारेकट!
यसले बनाउँछ Jaguar सबैभन्दा नयाँ सिसाई ब्रान्ड मध्ये एक जुन कपाल उद्योगको लागि आउँदछ जब डिजाइन र दक्षताका सिमानाहरू धक्का दिन्छ।
तपाईं पूर्ण ब्राउज गर्न सक्नुहुन्छ Jaguar कैंची संग्रह यहाँ!
२.जन्टेत्सु: उत्तम मूल्य पेशेवर कपाल सिंची ब्रान्ड
जुनन्टेत्सु एउटा कपाल कैंची ब्रान्ड हो जसले सस्तो मूल्यमा सजिलो, अझै शक्तिशाली डिजाइन र मोडेलहरू उत्पादन गर्दछ।
जस्तै Yasaka, तिनीहरू कपालका कपाल र नाईहरूको लागि पेशेवर कपाल कैंची सिर्जना गर्न सबै भन्दा राम्रो स्टील सामग्री प्रयोगमा ध्यान केन्द्रित गर्दछन्।
सबै भन्दा लोकप्रिय Juntetsu मोडेल हो ओफसेट, गुलाब सुन र रात श्रृंखला त्यो लाइन स्टिल को शीर्ष, तीक्ष्ण उत्तल किनारा टुक्राउने ब्लेड, र आरामदायक अफसेट एर्गोनोमिक्स प्रयोग गर्दछ।
आफ्नो तीक्ष्ण उत्कृष्ट किनारहरूको लागि सबैभन्दा लोकप्रिय, जुनटेत्सु अधिक र अधिक मोडेलहरू प्रतिस्पर्धा गर्न जारी गर्दछ Joewell, Yasaka र अन्य लोकप्रिय ब्रान्डहरू।
तपाईको सम्पूर्ण संग्रह ब्राउज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जंटेत्सु कपाल कैंची!
3. Yasaka: सबै भन्दा प्रसिद्ध चिनियाँ जापान ब्रान्ड
Yasaka सेकी, आधिकारिक वेबसाइट यहाँ फेला पर्‍यो, जापानको सब भन्दा पुरानो र सबैभन्दा प्रतिष्ठित कपाल कैंची ब्रान्ड मध्ये एक हो। सही बाहिर उत्पादन नारा, जापान, तिनीहरू दुनिया भर मा पेशेवर कपाल र नाईहरूको लागि प्रीमियम ग्रेड जापानी कैंची उत्पादन गर्दछ।
स्थानीय प्रीमियम जापानी कोबाल्ट र मिश्र धातु इस्पात प्रयोग, Yasaka एक पेशेवर कपाल काट्ने अनुभव को लागी एक विशिष्ट प्रकारको तीखो क्लैम आकार ब्लेडको साथ हेन्ड क्राफ्ट्स कपाल कैंची।
डिजाइनहरू सरल छन्, तर निर्माण र समग्र गुणवत्ता अचम्मको छ। को Yasaka ब्रान्ड विशेष गरी अष्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड, क्यानडा र संयुक्त राज्य अमेरिका मा लोकप्रिय छ।
तपाईको सम्पूर्ण संग्रह ब्राउज गर्न सक्नुहुन्छ Yasaka यहाँ कपाल कैंची!
4. Ichiro: व्यवसायिक कैंची सेटहरूको साथ महान मूल्य ब्रांड
Ichiro एक कपाल कैंची ब्रान्ड हो, सामान्य डिजाइन र अद्भुत मूल्यको साथ बाल कटाउने उपकरण उत्पादन गर्दछ। उच्च-गुणस्तरको इस्पातको प्रयोग गरेर उनीहरू आफ्नो उत्तल-एज ब्लेडहरूको साथ प्रिमियम कपाल काट्ने अनुभव सिर्जना गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्दछन्।
यो Ichiro कैंची ब्रान्ड उनीहरूको सेटको लागि लोकप्रिय छ, विशेष गरी गुलाब गोल्ड मोडेल, जुन २०२० र २०२० मा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सबै भन्दा राम्रो विक्रेता मध्ये एक थियो।
"साधारण डिजाइनहरू, गुणस्तर निर्माण ..." हो Ichiroको आदर्श वाक्य र के उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पेशेवर कपाल र नाईहरू प्रदान गर्ने कुरामा ध्यान दिन्छन्।
तपाईं पूर्ण ब्राउज गर्न सक्नुहुन्छ Ichiro कैंची ब्रान्ड संग्रह यहाँ।
5. Kamisori: शक्तिशाली कैंची डिजाइनको साथ अद्वितीय ब्रान्ड
यो Kamisori हेयरड्रेसि sc कैंची ब्रान्ड एक प्रसिद्ध ब्रान्ड हो जसले पेशेवरहरूको लागि शक्तिशाली कपाल र कजाईको कतरनी उत्पादन गर्दछ।
सबै भन्दा प्रसिद्ध Kamisori नाई तरवार, तिनीहरू उच्च गुणवत्ता इस्पातबाट बनाइएको अद्वितीय मोडेलहरू वितरण गर्न जारी राख्छन् जुन तिनीहरू बनाइएको भन्दा छिटो बिक्री गर्दछन्।
तुलनामा Yasaka र Joewell, Kamisori अधिक र colorful्गीन डिजाइनहरूमा केन्द्रित हुन्छ, र प्रत्येक मोडेल सीमित संस्करण हो जुन ओभर-टाइम परिवर्तन हुन्छ।
तपाईको सम्पूर्ण संग्रह ब्राउज गर्न सक्नुहुन्छ Kamisori यहाँ कैंची!
6. Mina: सर्वश्रेष्ठ शुरुआत र अप्रेंटिस कैंची ब्रान्ड
Mina एक कैंची ब्रान्ड हो जसले शुरुवातकर्ता, शिक्षुता, विद्यार्थी र घरका कपालका उत्साहीहरूका लागि गुणस्तरीय कात्रीको क्यान्सर उत्पादन गर्दछ।
सबैजना कैंचीको प्रीमियम जोडीको लागि उच्च मूल्य तिर्न खोज्दैनन्, त्यहि हो Mina दिनको बचत गर्न आउँदछ उनीहरूको भरपर्दो र सस्तो कपाल कात्तीको साथ।
सस्तो सधैं कैंचीको जोडी वर्णन गर्न सकरात्मक शब्द हुँदैन, तर Mina stars ताराहरू प्राप्त गर्न जारी राख्छ, विशेष गरी उनीहरूको सब भन्दा लोकप्रियमा Umi मोडेल, अझै किफायती मूल्य कायम गर्दा।
तपाइँको पूरा संग्रह ब्राउज गर्नुहोस् Mina यहाँ कपाल कैंची को ब्रान्ड!
7. Joewell: कस्टम र अद्वितीय डिजाइनहरूको लागि जापानको सर्वश्रेष्ठ सिंची ब्रांड
Joewell एक कैंची ब्रान्ड हो, जुन आधिकारिक वेबसाइट यहाँ फेला पर्‍यो, जसले आफ्नो जापानी इञ्जिनियरिंग मार्फत कपाल कैंची उद्योगमा नवीनता ल्याउन जारी राख्छ।
रबर लेपित ह्यान्डलहरू, अद्वितीय Joewell ब्लेड, स्क्र्याच-प्रतिरोधी स्क्रू कभर र अधिक। Joewell आविष्कार गर्दछ र तपाईंलाई लगभग सबै जोडीमा एक प्रकारको कैंची मोडेल प्रदान गर्दछ।
एक उत्तम जापानी शैली कपाल कैंची ब्रान्ड हो Joewell। दशकौं अनुभव जापानबाट कैंचीको प्रत्येक जोडीमा राखियो।
तपाईं को पूरा संग्रह ब्राउज गर्न सक्नुहुन्छ Joewell यहाँ कैंची ब्रान्ड!
8. Feather: जापानमा सर्वश्रेष्ठ रेजर र आधारभूत कैंची ब्रान्ड
यो Feather जापान ब्राण्ड, आधिकारिक वेबसाइट यहाँ फेला पर्‍यो, पेशेवरहरूको लागि उच्च-गुणवत्ता कपाल रेजर र कैंची उत्पादन गर्दछ। यद्यपि Feather प्रायः उनीहरूको रेजरहरूको लागि चिनिन्छ, तिनीहरू वास्तवमै कपालको क्यान्सर उत्पादन गर्दछन् जुन बढी र अधिक लोकप्रिय हुन सुरु भयो!
तपाईं पूर्ण ब्राउज गर्न सक्नुहुन्छ Feather जापान ब्रान्ड संग्रह यहाँ!
मानार्थ उल्लेख: कपाल कैंची ब्रान्डहरू
त्यहाँ धेरै अचम्मको कपाल कैंची ब्रान्डहरू छन् जसले विश्वभरि सैलुन र नाई पसलहरूको लागि प्रिमियम कपाल काट्ने उपकरणहरू उत्पादन गर्दछ। यहाँ केहि अन्य ब्रान्डहरू छन् जुन तपाईंलाई रुचि हुन सक्छ!
ओसाका कैंची कुनै पनि गम्भीर हेयरड्रेसर कपाल काट्ने संग्रहको लागि उत्कृष्ट थप हो। उनीहरूले प्रिमियम स्लाइस काट्ने कपाल कैंची उत्पादन गर्न उच्च गुणस्तरको जापानी स्टिल प्रयोग गर्छन्।
यसको बारेमा थप पढ्नुहोस् जुनून ओसाका कैंची ब्रान्ड यहाँ!
त्यहाँ एक व्याख्या छ किन Wahl Corporation ले 100 वर्ष भन्दा बढीको लागि कपाल कैंची र क्लिपरहरू निर्माण गरिरहेको छ। तिनीहरू धेरै प्रभावकारी छन्।
Wahl Scissors प्रिमियम सामग्रीबाट बनाइन्छ र हल्का तौल डिजाइनहरू छन् जसले तिनीहरूलाई घर वा व्यावसायिक सैलूनमा प्रयोगको लागि आदर्श बनाउँछ।
तिनीहरू AISI 420, आइस टेम्पर्ड स्टेनलेस स्टीलको साथ पनि आउँछन् जसमा सुरुचिपूर्ण साटन फिनिश हुन्छ जसले तिनीहरूलाई व्यावसायिक देखिन्छ। यदि तपाईं उचित मूल्यको लागि उत्कृष्ट जोडी कैंची खोज्दै हुनुहुन्छ भने Wahl Shears तपाईंको लागि उत्तम विकल्प हो!
यसको बारेमा थप पढ्नुहोस् Wahl हेयरड्रेसिङ शियरहरू यहाँ!
Kasho (काई) जापानी स्टिल हेयरड्रेसिङ शियर
Kasho व्यावसायिक कैंची जापानमा उच्च कार्बन भएको स्टेनलेस स्टील मिश्रबाट बनेको छ।
यसले शीर्ष-अफ-द-लाइन ब्लेडहरूमा परिणाम दिन्छ जुन पहिरन र क्षरण प्रतिरोधी हुन्छ।
Kashoको अत्याधुनिक किनारा हरेक कैंचीको लागि अद्वितीय छ र प्रिमियम ग्रेड कैंची ब्लेड संग प्रयोग गर्दा चिकनी, सटीक काटन प्रदर्शन प्रदान गर्दछ। यो उन्नत उत्पादन प्रक्रियाले खाली ब्लेडको बाहिरी र भित्री सतहहरूको लागि सही वक्रता बनाउँदा पूर्ण सटीकतालाई अनुमति दिन्छ।
यसको बारेमा थप पढ्नुहोस् Kasho यहाँ व्यावसायिक कपाल र बार्बरिंग को लागी कपाल कैंची!
निष्कर्ष: २०२२ र भविष्यका लागि उत्कृष्ट कपाल कैंची ब्रान्डहरू के हुन्?
व्यावसायिक कपाल र कपालका लागि कैंची ब्रान्डको लेख सम्म पुग्नु भएकोमा धन्यवाद!
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, उत्तम कैंची ब्रान्डहरू अन्ततः तपाईंको आवश्यकतामा निर्भर गर्दछ, किनकि विद्यार्थी वा प्रशिक्षार्थीले रुचाउँछन् Mina कैंची, र एक पेशेवर हेयरड्रेसर मनपर्न सक्छ जान्तेत्सु or Joewell.
प्रत्येक वर्ष हामीलाई कैंची ब्रान्डको साथ नयाँ र रमाईलो मोडेलहरू रिलिज गर्दछ। अहिलेसम्म सब भन्दा बढी बिक्री हुने मोडेलको ब्रान्ड थियो Mina संग Umi मोडेल यो घर मा कपाल काट्न चाहने अधिक व्यक्तिका कारण हो, र सिकारुको रूपमा हेयरड्रेसिंग पनि सिक्छ।
हामी भविष्यमा अधिक भरपर्दो र रोमाञ्चक कैंची ब्रान्डहरू हेर्ने आशा गर्दछौं, तर सबै भन्दा राम्रोसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सधैं गाह्रो छ!
नयाँ कम्पनीले गर्न सक्ने गाह्रो चीजहरू मध्ये एक कैंची ब्रान्डको सुरुवात गर्नु हो, तर हामी ब्रान्डले कती राम्रोसँग उत्पादन गर्छ भनेर हेर्न हामी नयाँ मोडलहरू जहिले पनि प्रयास गर्दछौं।
हामी सूचीमा थप ब्रान्डहरू थप्दा एक नजर राख्नुहोस्, त्यस बेला सम्म, हामी आशा गर्दछौं कि तपाईं आफ्नो अर्को जोडी कैंची र कतराहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो पेशेवर ब्रान्ड रोज्न सक्नुहुन्छ!
हामीलाई बारम्बार सोधिन्छ "अष्ट्रेलियामा पेशेवर क्यान्सी ब्रान्डहरू के हुन्?", र हामीलाई थाहा छ कि त्यहाँ धेरै ब्रान्डहरू उपलब्ध हुँदा भरपर्दो जोडी रोज्न कति गाह्रो हुन्छ।
यस लेखमा, हामीले केश एक साथ उपलब्ध गराएका छौं हेयरड्रेसि sc सिंचीको सबैभन्दा राम्रो ब्रान्ड के हो!
प्रोफेशनल कैंची ब्रान्डले काटन र पातलोको लागि कपालको क्यान्सर समावेश गर्दछ। तिनीहरू सामान्यतया जापान वा जर्मनीमा बनेका हुन्छन्। प्रोफेशनल कैंची ब्रान्ड समावेश:
जान्तेत्सु कपाल कपाल
Yasaka Seiki जापान शियर्स
Jaguar व्यावसायिक जर्मनी
त्यसो भए के यी ब्रान्डहरूलाई व्यावसायिक बनाउँछ? केहि कारकहरू समावेश छन्:
पेशेवर कपाल र नाईबाट समीक्षा
कति वर्ष निर्माण
यदि तपाईं एक सुपरमार्केट मा जान, तपाईं कैंची को एक जोडी पाउन सक्छ, तर तिनीहरू व्यावसायिक हुनेछ?
तिनीहरूसँग उच्च-गुणवत्ताको स्टिल नहुन सक्छ, कमजोर एर्गोनोमिक्स र सुस्त ब्लेड हुन सक्छ।
त्यसोभए यस ब्रान्डको नतिजा पेशेवर हुनेछैन।
तर यदि तपाईं किनमेल गर्नुहुन्छ Yasaka or Kamisori, तपाईं तिनीहरू एक पेशेवर हेयरड्रेसिंग कैंची ब्रान्ड हो कि पाउनुहुनेछ:
तीव्र बेवल किनारा वा उत्तल किनारा ब्लेडहरू
हेयरड्रेसरको लागि थकान कम गर्ने अफगानिमिक्स अफसेट गर्नुहोस्
त्यहाँ अन्य धेरै स्पष्ट कारकहरू छन्, तर सबैभन्दा स्पष्ट एउटा हो: "के यसले कपाल काट्छ?" र यी कतराहरूको लागि उत्तर निश्चित "हो!" हो।
त्यसोभए जब तपाईं पेशेवर हेअरड्रेसि sc सिंची ब्रांडको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ, सही संकेतहरू खोज्नको लागि केही समय लिनुहोस् जुन यी ब्रान्डहरूले पेशेवर कपाल र / वा नाइहरू द्वारा प्रयोग गरिएको कैंची बेच्छन देखाउँदछ।
सबैभन्दा राम्रो केश कात्री ब्रान्डहरू के हुन्?
कैंची ब्रान्ड मूल्य बिन्दु गुणस्तर
जंटेत्सु कैंची $$ - $$$ उच्च
Yasaka कैंची $$ - $$$ उच्च
Jaguar जर्मनी $$ - $$$ कम देखि उच्च
Kamisori $$$ उच्च
Joewell $$$ उच्च
जब तपाईं हालको कपालका कैंची बजारमा हेर्नुहुन्छ, त्यहाँ नयाँ ब्राण्डहरू लगभग हरेक महिना देखा पर्दछन्।
त्यसोभए तपाईं कसरी त्यस्तो ब्रान्ड छनौट गर्नुहुन्छ जसले तपाईंलाई अफसोस अनुभव दिदैन?
समीक्षा, प्रतिक्रिया र सुनिश्चित गर्न को लागी तपाइँको आवश्यकताहरु लाई मिल्छ एक शुरू हो
जर्मनी, चीन वा जापानमा प्रायः पेशेवर ब्रान्ड निर्माण गर्दछ।
चीनमा निर्मित ब्रान्डहरू आवश्यक नै खराब हुँदैनन् किनकी उनीहरूले जापानी इस्पातलाई उच्च गुणवत्ताको कपाल काट्ने उत्पादनहरू उत्पादन गर्न प्रयोग गर्न सक्दछन्।
यी ब्रान्डहरू तब अधिक किफायती मूल्यमा व्यावसायिक कपालका कात्छा सिजर उत्पादनहरू बेच्न सक्षम छन्।
जापानी कपाल कैंची ब्रान्डका साथ व्यक्तिसँग वास्तविक र इमानदार आलोचना यो हो कि तपाईं यति धेरै ओभरहेडहरूको लागि भुक्तान गर्दै हुनुहुन्छ।
त्यो भर्खरै किनेको जापानी कात्रीको $ २,००० जोडीको लागि वास्तवमा make १ cost० ले खर्च गर्न सक्‍छ, तर हामीलाई $ २,००० चार्ज गरिँदैछ:
श्रम को उच्च लागत (जापान)
कम्पनीले नाफा लिन आवश्यक छ
यो आयात गर्ने एक अष्ट्रेलियाको कम्पनीले उनीहरूको -०-30०% मार्जिन पनि थपेको छ
जापानी र अष्ट्रेलियाली कर
शिपिंग र आयात शुल्क
अस्ट्रेलियामा यी pair १ sc० जोडी क्यान्सरले तखताहरूमा ठक्कर दिंदा, त्यहाँ यति धेरै ब्लोट छ कि यसले तपाईंको $ २,००० खर्च गर्छ।
यो जे हो त्यो हो, र हामी त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौं। तर अन्य उत्पादकहरूले समान जापानी हिटाची स्टीललाई सुरक्षित गर्दै छन् र उनीहरूलाई ओभरहेड घटाउन चीनमा उत्पादन गरिरहेछन्।
यो जहिले पनि काम गर्दैन। तपाईंसँग अक्सर कमजोर गुणस्तरको चिनियाँ कैंची हुन्छ, तर प्रायः यो स्टिल र पार्ट्स सस्तोमा बनेको कारण हुन्छ।
त्यसोभए जब तपाईं खोजी गर्दै हुनुहुन्छ प्रोफेशनल कपाल कात्री ब्रान्ड, माथिको सूचीको साथ सुरू गर्नुहोस्, निश्चित गर्नुहोस् कि ती सम्मानित छन् र मोडेलले तपाईंको आवश्यकताहरू एक पेशेवर हेअरड्रेसर वा नाईको रूपमा मेल खान्छ।
सबै भन्दा राम्रो ब्रान्ड प्रोफेशनल कपाल, नाई, विद्यार्थी, र घर कपालका लागि फरक हुन सक्छ, त्यसैले यो लेख निष्कर्षमा पुग्न, हामी केश उत्साही को हरेक वर्ग को लागी सबै भन्दा राम्रो ब्रान्ड सूचीकृत गर्दछौं।
Jaguar सोलिन्जेन कैंची: तिनीहरूको किफायती मूल्यहरू र उच्च-गुणवत्ता उत्पादनहरूको लागि
जंटेत्सु कैंची: तिनीहरूको अनुपम शैली र व्यावसायिक गुणवत्ताको लागि
Yasaka कैंची: अष्ट्रेलियाको सर्वश्रेष्ठ जापानी कैंची ब्रान्ड
Joewell कैंची: जापानबाट उपलब्ध सबैभन्दा प्रिमियम कपाल कैंची
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, अस्ट्रेलियाको शीर्ष ब्राण्डको क्यान्सर हेयरड्रेसरहरू र नाईहरूको लागि छनौट गरिन्छ जुन अष्ट्रेलियामा उपलब्ध उत्तम कैंची ब्रान्डहरू खोज्दै छ।
मेरो बच्चाले यो सहन सक्दैन जब अरू कसैले आफ्नो कपाल काट्छ त्यसैले मैले यसलाई आफैंमा लिनुपर्छ। अहिलेसम्म मैले मलबाट किनेको नाम नभएको कैंचीको जोडीमा भर परेको छु तर अब बच्चाले निर्णय गरे कि उसलाई लामो कपाल चाहिएको छ त्यसैले मैले के प्रयोग गर्छु र यसलाई कसरी स्टाइल गर्छु भन्ने कुरामा म धेरै होसियार हुनुपर्छ, ऊ एकदम राम्रो छ। कपाल। मैले नयाँ कैंची प्रयोग गर्दा उसले कस्तो प्रतिक्रिया देखाउँछ हेरौं...
तपाईंसँग साँच्चै धेरै ब्रान्डहरू छन्! जब म यस वेबसाइटमा अवतरण गरें मैले यति ठूलो छुटको साथ यति धेरै व्यावसायिक उत्पादनहरू हेर्ने आशा गरेन। म दुई कैंचीमा यति धेरै खर्च गर्न अलि अनिच्छुक थिए तर त्यसपछि म घर कैंचीको श्रेणीमा परें। समीक्षा खण्डले मलाई प्रयास गर्न विश्वस्त बनायो Mina कालो सेट - जुन बुट गर्न धेरै प्यारो देखिन्छ। तिनीहरूलाई मेरो हात प्राप्त गर्न प्रतीक्षा गर्न सक्दिन!
फेब्रुअरी 09, 2022
म घरको प्रयोगको लागि कैंची किन्न खोज्दै छु तर चीजहरू मैले सुरुमा सोचेको भन्दा अलि बढी जटिल देखिन्छ। अहिले मेरो अनुसन्धान गर्दै, म बुद्धिमानीपूर्वक लगानी गर्न चाहन्छु किनकि मसँग मध्यम लम्बाइको कपाल छ जसलाई थप कोमल, माया र हेरचाह चाहिन्छ। म हरेक दुई महिनामा मेरो टुक्रा ट्रिम गर्छु तर भर्खरै मैले लेयरिङ प्रविधि सिक्न व्यवस्थित गरें जसले यसलाई घरको सत्रको लागि उपयुक्त बनाउँछ।
बाट सुरु भयो Ichiro, प्रयास गरे Jaguar पातलोको लागि र मैले भन्नु पर्छ कि म त्यति प्रभावित भएन। हो, कैंची आफैंले अलि बढी प्रिमियम महसुस गर्छ तर म यसको लागि मात्र त्यो सबै अतिरिक्त पैसा फोर्क गर्दिन। यदि तपाईंसँग स्थिर हात छ र विभिन्न प्रविधिहरू अभ्यास गर्नुहुन्छ भने म शर्त गर्छु कि तपाईंले कुनै पनि साथ उत्कृष्ट गर्नुहुनेछ Ichiro सेट
फेब्रुअरी 08, 2022
वाह, कस्तो राउन्डअप! कहिल्यै अन्त्य नहुने लक डाउनको साथमा महामारीले मेरो कपालमा विनाश ल्यायो त्यसैले मैले हरेक सम्मानित महिलाले गर्ने काम गरें र यसको लागि घरमै समाधान गुगल गरें। मलाई द्रुत ट्रिम चाहिन्छ, विशेष गरी मेरो ब्याङहरूको लागि, त्यसैले म अनुमान गर्दैछु कि म आफैं गर्न सक्छु। घरबाट कैंची क्लिक गरियो Mina, आशा गरौं कि म आफैं गर्न सक्षम छु।
भर्खरै सुरु हुँदै गरेको कपालको लागि धेरै उपयोगी स्रोत। मैले केही समीक्षाहरू मार्फत गएको छु र पहिले नै केही मनपर्नेहरू फेला पारेको छु। मैले उच्च अन्त ब्रान्डहरूबाट केही धेरै किफायती सम्झौताहरू देखेर म प्रभावित भएँ भन्न चाहन्छु, मैले अर्डर राख्न चाहँदा के उपलब्ध छ भनेर हेर्नको लागि फर्केर आउनु पर्छ।
म सबै सरल, स्लिम डिजाइनको लागि हुँ त्यसैले Juntetsu एक स्पष्ट छनौट थियो। मलाई मेरो निर्णयमा पछुताउनु छैन, वास्तवमा, मैले तिनीहरूलाई सुरु गर्ने सबैलाई सिफारिस गरें। न केवल तिनीहरू देख्छन् र प्रीमियम महसुस गर्छन्, तर तिनीहरू अत्यन्त सटीक र सजिलैसँग काट्छन्। मर्मत प्रक्रिया एकदम सजिलो छ र यदि तपाइँ तिनीहरूलाई बेवास्ता गर्नुहुन्न भने तिनीहरू राम्रोसँग रहन्छन्।
फेब्रुअरी 06, 2022
म प्रयोग गरिएको छ Jaguar वर्षौंको लागि र म सुरक्षित रूपमा भन्न सक्छु कि तिनीहरू सबै भन्दा राम्रो हुन्। हो, तिनीहरू बजेट-अनुकूल विकल्प होइनन् तर तपाईंले तिर्नु भएको कुरा प्राप्त गर्नुहुन्छ। तपाईं प्रतिष्ठित ब्रान्डमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ भने किन दसौं कैंचीहरू मार्फत जानुहोस्? मैले पहिलो दुई महिना नो-नाम कैंचीको साथ सुरु गरें र त्यसपछि अपग्रेड गरें Jaguar.
मूल्य बिन्दु मेरो खरिद प्रक्रियामा एक ठूलो कारक हो किनकि म कैंचीको जोडीमा धेरै खर्च गर्न सक्दिन जुन मैले वर्षमा धेरै पटक प्रयोग गर्छु। म एक सभ्य मूल्यको सेट खोज्दै छु जसले मलाई धेरै खर्च गर्दैन। मैले भर्खरै मलाई मनपर्ने केहि बुकमार्क गरे तर दुर्भाग्यवश ती अहिले बिक्रीमा छैनन् #FingersCrossed
मलाई यो साइटमा एक वा दुई लेखहरू पढ्नु बाहेक कपालको क्यान्सरको बारेमा धेरै थाहा छैन। उत्तम कैंची ब्रान्डको सूचीलाई हेर्दै, म साथ जान्छु Ichiro किनभने तिनीहरू एक राम्रो मूल्य जस्तो देखिन्छ र तिनीहरू सुन्दर देखिन्छन् (विशेष गरी सुनको सेट)। खैर, यो केहि राम्रो देखिने वेबसाइटहरू हो जुन मैले केहि समयमा देखेको छु। रंग र ठाउँको राम्रो प्रयोग।